April 2019 – MM Crime
စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာမယ့် ကာရိုက်တာအတွက် အကောင်းဆုံးလေ့လာသင်ယူနေတဲ့ ယဉ်လက်
စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လာမယ့် ကာရိုက်တာအတွက် အကောင်းဆုံးလေ့လာသင်ယူနေတဲ့ ယဉ်လက် ယဉ်လက်ကတော့ အနောက်တိုင်းအကနဲ့ မြန်မာအက တွေကို တစ်ပြိုင်တည်း သင်ယူနေရပါတယ်တဲ့။ ဒါကလည်း သူမအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်လာမယ့် ကာရိုက်တာအတွက် ကြိုးစားမှုတစ်ခုပဲလို့ ဆိုပါတယ်။ ယဉ်လက်ဟာ လက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင် အသစ်လေးတွေထဲက တစ်ယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း နောက်ထပ်ရိုက်ကူးရမယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးထဲက ကာရိုက်တာအတွက် မြန်မာအက နဲ့ အနောက်တိုင်းအကကို သင်ယူလေ့လာနေတယ်လို့ မီဒီယာ အင်တာဗျူးတွေမှာ ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ ‘’ နောက်လမှာ ရိုက်ကူးမယ့် ရုပ်ရှင်ကားကြီးအတွက်လည်း ယဉ်လက် အခု အက သင်နေပါတယ်။ မြန်မာ့ရိုးရာအကရယ်၊ အနောက်တိုင်းအကရယ်ကို ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ ပုံမှန်မြင်နေကြမဟုတ်တဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ယဉ်လက်လည်း အစွမ်းကုန် ကြိုးစားပြီးတော့ သင်ယူနေပါတယ်’’ လို့ သူကဆိုပါတယ်။ မြန်မာအကနဲ့ […]
အောင်မြင်မှုရရ မရရ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မှုရှိအောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ အောင်မြင့်မြတ်
အောင်မြင်မှုရရ မရရ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မှုရှိအောင်နေတယ်ဆိုတဲ့ အောင်မြင့်မြတ် ချစ်သူသက်တမ်း ၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အောင်မြင့်မြတ် နဲ့ အိမီမီကို တို့ စုံတွဲလေးကိုတော့ မသိတဲ့သူ မရှိသလောက်ပါပဲ။ အောင်မြင့်မြတ်က အနုပညာလောကမှာ နာမည်ရလာပြီဆိုပေမယ့် သူ့ရဲ့ အချစ်ကတော့ ပြောင်းလဲသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ အောင်မြင့်မြတ် နဲ့ အိမီမီကိုတို့ စုံတွဲဟာ အခုဆိုရင် ချစ်သူသက်တမ်း ၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ၅ နှစ်အတွင်းမှာလည်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် နားလည်မှုအပြည့်အဝ ထားတယ်လို့ အောင်မြင့်မြတ်က Duwun Media ကနေပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ‘’ ကျွန်တော်တို့တွေက အကြီးအကျယ် ပြဿနာဖြစ်ကြလည်း တစ်ညပဲ။ နောက်နေ့ မနက်ကျလို့ရှိရင် ရန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြန်လည်းမပြောဖြစ်ကြတော့ဘူး။ တစ်ခါတလေ ကျလို့ရှိရင် လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်၊ နှစ်ပတ်လောက်က ဘာလို့ […]
ကျောက်ကပ်ဝေဒနာရှင်တွေ မတည့်ပေမယ့် ဆေးဖက်ဝင်တဲ့ စောင်းလျားသီး ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win. ကြယ်တာရာလို့တောင် အမည်ပေးတင်စားထားတဲ့ စောင်းလျားသီးဟာ လှီးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ တကယ်လည်း ကြယ်ပွင့်ပုံစံပါပဲ။ အရသာက ချဉ်ပြုံးပြုံးနဲ့ အရည်ရွှမ်းပြီး စားကောင်းတဲ့ အသီးတစ်မျိုးပါ။ သွားကျိန်းလို့ မစားရဲကြဘူးဆိုသူတွေတောင် စောင်းလျားသီးယို၊ စောင်းလျားသီးနဲ့ချဉ်စပ်နှပ်ထားတဲ့လက်ဖက်တို့ကို စားရင် ကြွသွေားနိုင်ပါတယ်။ စောင်းလျားသီးမှည့်ပြီဆို ချဉ်ပြုံးပြုံးအရသာလေးမှာ သကြားခတ်ထားသလို အရသာနဲ့ တကယ်ကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟိုးအရင်ကအိမ်ရှေ့တွေမှာ စိုက်ထားတတ်တဲ့ စောင်းလျားပင်လေးတွေက အခုတော့ရှားပါးနေပါပြီ။ အပင်ရှိနေသေးတဲ့အိမ်တွေမှာဆိုလည်း တန်ဖိုးမစား၊ သိပ်မစားကြတော့ လမ်းပေါ်မှာပြန့်ကျဲ။ တကယ်တော့ တန်ဖိုးမကြီးတဲ့ သဘာဝအသီးအနှံ၊အပင်လေးတွေက ဆေးဖက်ဝင်တာ လူသိနည်းကြပါတယ်။ ဥပမာ ငယ်ငယ်ကဆော့ကြ၊စားကြတဲ့ ဗောက်သီးကဆေးဖက်ဝင်မှန်းသိလာတဲ့အခါ နိုင်ငံခြားမျိုးတွေကို ဈေးကြီးပေးပြီးမှာယူကြတယ်။ အခုလို တန်ဖိုးမထားကြတဲ့ သဘာဝဆေးဖက်ဝင်အသီးလေးတွေကို တန်ဖိုးသိလာတဲ့အခါ လွယ်လွယ်နဲ့ရှာဝယ်လို့မရနိုင်တော့ဘူး၊ […]
နန်းစွန့်တော့မည့် ဂျပန်အင်ပါယာခေတ်မှ လေကို သံဘူးဖြင့်ထည့်၍ ရှစ်ဒေါ်လာဖြင့်ရောင်
နန်းစွန့်တော့မည့် ဂျပန်အင်ပါယာခေတ်မှ လေကို သံဘူးဖြင့်ထည့်၍ ရှစ်ဒေါ်လာဖြင့်ရောင် လာမည့်သီတင်းပတ်အတွင်း အသက် ၈၅ နှစ်အရွယ် ဂျပန်အင်ပါယာဘုရင်က နန်းစွန့်တော့မည်ဖြစ်ရာ ခေတ်ဟောင်းမှလေများကို သံဘူးများအတွင်း ထည့်သွင်း၍ တစ်ဘူးလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ရှစ်ဒေါ်လာခန့်ဖြင့် ရောင်းချလျက်ရှိကြောင်း The Telegraph သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ယခုလက်ရှိ အင်ပါယာဘုရင်၏ ခေတ်ကို ဂျပန်ဘာသာဖြင့် ဟေဇယ်ဟု သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ထားရာ ဟေဇယ်ခေတ်ဟောင်းလေးများကို ထည့်သွင်းထားသည့် သံဘူးတစ်ဘူးလျှင် ဂျပန်ယန်းငွေ ၁,၀၈၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇ ဒသမ ၅) ဖြင့် ဂီဖူပြည်နယ် ဟီနာရီကျေးရွာတွင် ရောင်းချနေခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ အသက် ၈၅ နှစ်အရွယ် ဟေဇယ်ခေတ်ဘုရင် အာကီဟီတိုမှာ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်း ပထမဆုံးနန်းစွန့်သည့်ဘုရင်အဖြစ် လာမည့်သီတင်းပတ်အတွင်း ထီးနန်းစွန့်မည်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ အရိုက်အရာကို အိမ်ရှေ့မင်းသားဖြစ်သူ နာရူဟီတိုက ဆက်ခံမည်ဖြစ်သည်။ […]
နန်းဆု ကြွေသွားစေလောက်တဲ့ G Fatt ရဲ့ တောင်းပန်စာ
နန်းဆု ကြွေသွားစေလောက်တဲ့ G Fatt ရဲ့ တောင်းပန်စာ G Fatt ရဲ့ တောင်းပန်စာကို ဖတ်ပြီး နန်းဆုတစ်ယောက် စိတ်ဆိုးပြေသွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တောင်းပန်စာကို ဖတ်ရတာလည်း အရမ်းကို ရိုမန့်တစ် ဆန်လွန်းလှပါတယ်။ ￼ Photo : နန်းဆုရတီစိုး အဆိုတော် G Fatt က စိတ်ကောက်နေတဲ့ ချစ်သူလေး နန်းဆုရတီစိုးက ရိုမန့်တစ်ဆန်ဆန် တောင်းပန်စာလေးနဲ့ တောင်းပန်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ G Fatt က ချစ်သူနှစ်ဦးမှာ သူက ပိုချစ်ခဲ့တဲ့သူဆိုပြီး ပြောထားပါသေးတယ်။ သူ့ရဲ့ တောင်းပန်စာလေးမှာ “ဒီတစ်ခါ တကယ်လမ်းခွဲပြီ”လို့အော်ဟစ်ဖုန်းချပြီးမှ သူပြန်ခေါ်မယ့် ဖုန်းလေးမျှော်နေတက်တဲ့ပြတ်သားလွန်းသူကြီးဟာ ကျွန်တော်ပေါ့ ..စိတ်တွေကုန်နေပြီလို့ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြမိတော့ အချစ်တွေမကုန်သေးဘူးမလား လို့ ပြုံးပြီးပြန်မေးကြတဲ့ မေးခွန်းအတွက် ကိုယ့်မှာ […]
လျှပ်​စစ်​မီး ဘာ​ကြောင့်​ပျက်​တာလဲ… ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ မီးပျက်​​နေချိန်​ ဖုန်းတဂွမ်​ဂွမ်​ ဆက်​/Online ​​ပေါ်တင်ကာ​ ကြိမ်း​မောင်း ​နေကြမဲ့အစား လျှပ်​စစ်​သ​ဘောသဘာဝ ကို ​ခေတ်​မှာ သိ​စေမြင်​​စေချင်​လွန်းလို့ပါ။ မီးပြတ်​​နေချိန်​ ပျာယာခတ်​ပြီး ဖုန်းချက်​ချင်း မ​ဖြေနိုင်​ဘဲ လုပ်​​ဆောင်​​နေရတဲ့ ဝန်​ထ​မ်း​တွေကို နားလည်​​စေချင်​တာပါ။ မီးပြတ်​ချိန်​မှာ အပြင်​ဖုန်းထက်​ ဌာနနဲ့ ဖုန်း​ပြောချိတ်​ဆက်​ရဖို့က အဓိကပါ။ မီးမပြတ်​​စေချင်​တာ ပြည်​သူ​တွေထက်​ လျှပ်​စစ်​ဝန်​ထမ်း​တွေပါ ခင်​ဗျာ။ ‘ဓါတ်အားပြတ်တောက်ရခြင်း အကြောင်းရင်းများ’ 1.System Breakdown 2.Line Fault 3.Shut Down 4.Load Shed 1.System Breakdown ⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡ System Breakdown ဆိုသည်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးကို လျှပ်စစ်ပေးနေသော ဓာတ်အားစနစ် တစ်ခုလုံး၌ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြတ်တောက်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ အတော်များများက […]
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ ကိစ္စအပေါ် ဦးကျော်သူရဲ့ သဘောထား
ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ ကိစ္စအပေါ် ဦးကျော်သူရဲ့ သဘောထား ဦးကျော်သူက ဧရာဝတီမြစ်ဆုံ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့ သဘောထားကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြလာပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ကျော်သူကတော့ မြစ်ဆုံ အရေးကိစ္စအပေါ် သူ့အနေနဲ့ ပါဝင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေက လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်က ရှိခဲ့ပြီးပြီလို့ Duwun Media အင်တာဗျုးမှာ ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ ‘’ မပါတော့ပါဘူး။ မပါတော့ဘူးဆိုတာကလည်း ဟိုး ၅ နှစ်လောက်ကတည်းက ဧရာဝတီကိစ္စကို ကျွန်တော်တို့ ဒီအသင်းမှာပဲ လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာပြီးသွားပြီ။ အခုကတော့ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့လူကြီး တွေဆက်လုပ်ရမယ့် ကိစ္စပဲ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ပြည်သူလူထုရဲ့ ခံစားချက်ကို ပြည်သူလူထုကိုယ်စား တင်ပြပြီးပြီ။ […]
သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင် သမ္မတ၏ ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းခွင့်ဖြင့် ပြန်လွတ်လာမည်ဟု သတင်းထွက်နေ
သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင် သမ္မတ၏ ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းခွင့်ဖြင့် ပြန်လွတ်လာမည်ဟု သတင်းထွက်နေ တတိယအကြိမ် ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်တွင် သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင် ပြန်လွတ်လာမည်ဟု Speaker ၏ သတင်းရင်းမြစ်များထံမှ သိရသည်။ သရုပ်ဆောင် မိုးအောင်ရင် ကို နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်က ပုဇွန် တောင်မြို့နယ် တရားရုံးမှမူးယစ် ဆေးဝါးလက်ဝယ်တွေ့ရှိသုံးစွဲမှု ပုဒ်မများဖြင့် အလုပ်နှင့်ထောင် ဒဏ် ၅ နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပြီး ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် အရှေ့ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးက မူးယစ်ဆေးဝါးလက် ဝယ်တွေ့ရှိမှု ပုဒ်မ-၁၉(က)ဖြင့် အလုပ်နှင့် ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည့်အတွက် အမှုနှစ်မှု ပေါင်း ထောင်ဒဏ် ၁၇ နှစ်ကျခံ နေရခြင်းဖြစ်သည်။ တတိယအကြိမ် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်း သက်သာခွင့်တွင် မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားသည့်သူများ ပါလာရန်မျှော်မှန်းကြောင်း […]
အလွန် အကျိူးထူးစေသော ဂုဏ်တော် ပုတီးစိပ်နည်း🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
အလွန် အကျိူးထူးစေသော ဂုဏ်တော် ပုတီးစိပ်နည်း 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ဂုဏ်တော် 9ပါးကို ပုတီး (10)ပတ်ရအောင် ခွဲ၍ စိပ်နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မည်သည့်နေ့သားသမီးမဆို တနင်္ဂနွေနေ့ ည. 9နာရီမှည 12နာရီအတွင်း အဆင်ပြေချိန်တွင် စိပ်ပါ။ နောက်တစ်ပတ် တနင်္ဂနွေနေ့ထိ (8)ည တိတိ ညစဉ် စိပ်ပါ။နေ့စဉ် 10ပတ် စိပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။စိပ်ရမယ့် အချိန်အတူတူပါဘဲ။ ဘုရားရှင်အား သောက်တော်ရေချမ်းများ ဖယောင်းတိုင် အမွှေးတိုင်များ ပူဇော်၍ စိပ်ပါ။ သတိပြုရန်မှာပုတီးစိပ်နေသော 8ရက်အတွင်းတွင် မိမိအလိုချင်ဆုံးအဖြစ်ချင်ဆုံးဆုတစ်ခုသာတောင်းရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဤ ပုတီးစိပ်နည်းကို အလုပ်ရှာနေသော ညီမငယ်တစ်ဦးအား စိပ်စေရာ တစ်လအတွင်း ခန့်မှန်းထားသည်ထက် လစာပိုကောင်းသော အလုပ်ရသွားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေ၍ မိဘအိမ်ပြန်နေသူ ညီမငယ်တစ်ဦးက. ပုတီးစိပ်ပြီး ရက် […]
နိုင်ငံအကျိုးပြု ဇာတ်ကားမှာ စစ်တပ်အသိုင်းအ၀ိုင်းက အားပေးမှုအပေါ် ယဉ်​လတ်​ခံစားချက်….
နိုင်ငံအကျိုးပြု ဇာတ်ကားမှာ စစ်တပ်အသိုင်းအ၀ိုင်းက အားပေးမှုအပေါ် ခံစားချက်…. ရှေ့တန်းမှပြန်လာတဲ့ သူတွေကို ကြိုရတဲ့အပေါ်မှာ သူရဲ့ခံစားချက်ကိုပြောပြလာတဲ့ မင်းသမီးချောလေး” ယဉ်လက် ” နှင့်ခဏတာ MILKY WAY MEDIA နိုင်ငံအကျိုးပြု ဇာတ်ကားမှာ စစ်တပ်အသိုင်းအ၀ိုင်းက အားပေးမှုအပေါ် ခံစားချက်….ရှေ့တန်းမှပြန်လာတဲ့ သူတွေကို ကြိုရတဲ့အပေါ်မှာ သူရဲ့ခံစားချက်ကိုပြောပြလာတဲ့ မင်းသမီးချောလေး" ယဉ်လက် " နှင့်ခဏတာMILKY WAY MEDIA Posted by Myanmar Online News on Sunday, April 28, 2019